Pitbull - Ndiphe yonke into equle ne-Ne-Yo, AfroJack, ne-Nayer
I-Pitbull ibonisa isibini engatshatanga kwi-albhamu yakhe ezayo i- Planet Pit . Ngoxhaswa ngumsebenzi omnandi ovela kwi-Ne-Yo kunye nokunyuka kokuhlwa kwe-AfroJack, oku kungomnye ongamthabatha ukuya kumgangatho olandelayo kunye nabaphulaphuli be-pop. Kuya kuphakamisa igama eliphakamileyo lomvelisi waseDutch AfroJack. Yingoma elula ukuyithanda kwaye iya kufaka uluhlu lwadlalwayo lwamaqela kunye neqela.
Amazwi axhasayo amakhulu ukusuka ku-Ne-Yo
Isimo sengqondo esifanele kwingoma
Umxube wexesha lokudansa ebusuku
Ukungabi nobunzulu becala
Ibhalwe ngu-Armando C. Perez, uShaffer Smith kunye noNick van de Wall
Kukhutshwa ngo-Apreli 2011 nguJ Records
Ukuhlaziywa kweZikhokelo - Pitbull - "Ndiphe yonke into" equkethe i-Ne-Yo, i-AfroJack ne-Nayer
Ngokwesiqhelo, akukho nto ininzi eqhubekayo "Ndiphe yonke into," kodwa ilizwi likaPitbull elizithethayo apho akhuthaza sonke ukuba sinandipha ubomi bubeka ithoni yezinto ezenza abaphulaphuli bathuze. Amazwi ka-Ne-Yo ayenomdla kwaye asoloko esongela ukunqanda ukukhanya kweengoma. Amazwi ka-Nayer acelwa ukuba angcwatywe kumxube, kodwa ngu-Ne-Yo ohamba ngokuzenzekelayo ngaphandle kwemveliso. Bekungayi kuba yiPitbull ngaphandle kokuziqhayisa ngemali nangokwezesondo, kodwa ukuziva apha yinto yokuvumela ukuhamba kwintlalo.
Njengengendima yakhe ebalulekileyo kwi- Enrique Iglesias "endikuthandayo," uPigbull usuka kude kwiimpembelelo zesiLatini ibe yintsimi yomdaniso.
Isiphumo sifanele silethe umculo wakhe kubaphulaphuli abanzi behlabathi lonke. Eli libuye liqhube phambili kumvelisi waseDutch AfroJack. Uye wenyuka ngokukhawuleza kwimeko yomhlaba kwaye ngoku, ngokulandela ukusebenzisana kwangoku kunye noDavid Guetta, kunye no-remix ukusebenza kunye nokuthandwa kwe- Lady Gaga , iMadonna kunye ne- Black Eyed Peas phambili.
Kwiminyaka emibini edlulileyo i-Pitbull iye yavela njengomntu othembekileyo owenzayo. Ngaloo xesha uye wakhulula ama-pop hits aphezulu angama-10 njengomculi okhokelayo. "Ndiphe konke" kunokwenzeka ukuba ulandele kule ndlela. Uye wabonakala njengomculi ovelele kwezinye ezintathu ezintathu eziphambili ze-smash singles. I-albhamu elandelayo i- Planet Pit ilindeleke kwi-intanethi ngoJuni 14, 2011 kwaye kufuneka idibanise kuphela ukuphakama kwePhubull.
Ukuhlaziywa kwe "Pompeii" ngoBastille
Katy Perry - "Umlilo"
"Asiyi Kuhanjiswa": I-American Folk Folk Song
Ingoma ethi 'Doo Dah': "Imihlanga yaseCamptown" nguStephen Foster
Ubani I-Sauce yodada kwaye Kutheni "uBarra Streisand?"
Ukuhlaziywa kweNkcazelo yokuHlanganiswa kweNkqubo yokuHlanganiswa kweMpilo
UChristina Aguilera - "I-Candyman"
Imilinganiselo phakathi kweebherelo kwi-Standard WPRA Barrel Pattern
Ukubeka Iingcamango zokuPhucula iiCompet Acting and Comedy
Yintoni i-Canon kwiNcwadi?